‘गुणस्तरीय सेवाका लागी सहकारी ‘मर्ज’ हुनैपर्छ’ « Sahakari Nepal
‘गुणस्तरीय सेवाका लागी सहकारी ‘मर्ज’ हुनैपर्छ’
प्रकाशित मिति :4September, 2015 9:24 am
काठमाडौं, १८ भदौ । संख्यात्मकरुपमा सहकारी स्थापना हुनेक्रम चलेपनि सहकारीमा गुणात्मकता आउन सकेको छैन । साना पूँजीका कारण सहकारीले सीमित व्यक्तीलाई मात्र सेवा दिन सकेको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार भन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । विभागले सहकारीको संख्या भन्दा गुणस्तरका लागी मर्जरलाई जोड दिन थालेको छ । विभागले केही वर्ष अघि मात्र सहकारी एकीकरण निर्देशिकासमेत बनाइसकेको छ । मर्ज हुन चाहने सहकारीलाई प्रोत्साहन दिने गरेको सहकारी विभागका कृषि विज्ञ विष्णु घिमिरे बताउँछन् । ‘हामी सहकारी मर्ज भएर गुणस्तर सेवा दिन सकुन् भन्न चाहन्छौं’ उनले भने ।
सरकारले शहरी क्षेत्रमा खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका सहकारीमा समस्या देखिएको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारी दर्तामा रोक लगाएको छ । दर्ता भएका सहकारीमध्ये आधा भन्दा बढीले बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्या बढेसँगै सहकारी मर्ज गर्ने क्रम शुरु भएको छ ।
विभागले एकीकरण निर्देशिका बनाएपनि अपेक्षाकृत मर्ज हुन नसकेपनि मर्जप्रति अधिकांश सहकारी सकारात्मक भएको राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक चन्द्र ढकालले बताए । सहकारी एकीकरण भई उच्च गुणस्तरको सेवा दिन सके सदस्यलाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९५ वटा सहकारी मर्ज भएर ३५ वटा भएका छन् । सरकारले सहकारीको संख्या घटाई व्यवस्थित बनाउन एकीकरण (मर्जर) लाई प्रोत्साहन गरे पनि निर्देशिका स्पष्ट नभएको काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सञ्चालक एवम् हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका उप–महाप्रबन्धक गोपीनाथ घिमिरेले बताए । उनले विभागले सहकारी एकीकरणमा जोड दिएपनि स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेको बताए ।
मर्ज हुने सहकारीलाई कर छुट, अनुदानलगायतका कुरामा विशेष प्रोत्साहन गर्न सके धेरै सहकारी एकीकरण हुन सक्ने उनको ठम्याई छ । ‘मर्जको विकल्प छैन्, अब सहकारी मर्ज भएर बैंक भन्दा पनि राम्रो सेवा दिन सक्छन्’ उनले भने ।
सहकारी विभागले दुई वर्षअघि सहकारी संघसंस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेपनि सहकारी एकीकरण हुन समस्या परेको छ।
विभागका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, दोलखा, बर्दिया, बाँके, बाग्लुङ रौटहट, रुपन्देही, नवलपरासीमा सहकारी मर्ज भएका छन् । ती जिल्लामा ९५ सहकारी मर्ज भएर ३५ मा झरेका हुन् । विभागका अनुसार गत वर्ष १ सय सहकारी मर्ज भएका थिए । सरकारले मर्ज नीति ल्याएपनि सहकारी मर्ज हुन कठिनाइ भएको स्वयम सहकारीकर्मी नै बताउँछन् । काठमाडौंमा १८ सहकारी एकीकरण भएर ६ वटा सहकारी बनेका छन् । त्यस्तै ललितपुरका १६ सहकारीबाट ५, चितवनमा ५ बाट २ वटा सहकारी भएका छन् । त्यस्तै काभ्रेमा ६ वटा सहकारी मर्ज भएर २ वटा, दोलखामा ११ बाट २, बाँकेमा ६ बाट ३, रुपेन्देहीमा २ बाट १, नवलपरासीमा ३ बाट १ सहकारी भएका हुन् । अहिले मर्जको आवश्यकता बढ्दै गए पनि कार्यविधि स्पष्ट नभएको र एकीकरणपछि सरकारी स्तरबाट कुनै विषेश सेवा–सुविधा नभएको भन्दै अधिकांश सहकारी मर्ज हुन मानिरहेका छैनन् ।
केही मर्ज हुदाँ पद नपाइने भएकाले मर्ज गर्न आवश्यक नै ठान्दैनन् । कार्यविधिमा एकीकरणका लागि कुनै आकर्षण नरहेकाले मर्जर नगन्य मात्रामा भएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले बताए । यद्यपी नेफ्स्कुनले मर्ज अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवाकेन्द्र खोल्न दिने सुविधा छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए त्यसलाई नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । संस्था ठूलो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवाकेन्द्रसमेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भए उसले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको भएपनि सहकारी एकीकरणमा उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
एउटै संस्थाले धेरैलाई सेवा दिन सक्नु राम्रो कुरा भएकाले मर्ज आवश्यक भएको घिमिरेको भनाई छ । एकीकरणका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघ र कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृित लिनुपर्छ । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधान छ । संस्थाले आवश्यक ठाने मर्जर प्रक्रियामा विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मर्जर प्रक्रिया र मर्जरपछि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, विभागले मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे स्वीकृति बदर गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विभागका अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी अन्य सहकारीको तुलनामा मर्ज हुने क्रममा छन् ।
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. NEFSCUN का